Fahasamihafana eo amin'ny collagen Elastin sy ny fibre reticular | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny collagen Elastin sy ny fibre reticular | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / biolojia / Anatomy / fahasamihafana eo amin'ny collagen elastin sy reticular fibre
Fahasamihafana eo amin'ny collagen Elastin sy ny fibre reticular
25 Novambra 2020 Narotsak'i Samanthi
Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny kôlesterôla elastin sy ny kofehy reticular dia ny kofehin'ny collagen no karazan-tavy be indrindra ao amin'ny matrix extracellular ny vatan'ny mpampitohy raha ny kofehy elastin kosa dia kofehy madinidinika afaka mamelatra sy miverina ary hita ao anaty tady elastika izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, ny kofehy reticular dia kofehy marevaka izay mamorona tambajotra marefo amin'ny taova izay manana rafitra anatiny toy ny harato.
Ny tavy mpampitohy dia ilay sela be dia be sy be zahana indrindra hita ao amin'ny vatantsika. Ny tavy mampifandray dia mihazona ny vatanay sy ny taovantsika miaraka. Noho izany, mampifandray, manasaraka ary manohana ny sela rehetra ao amin'ny vatantsika izy io. Ny sela mifandray dia miaro ny vatantsika amin'ny ratra. Ny sela, ny kofehy ary ny vovo-tany no singa telo lehibe amin'ny tavy mpampitohy. Ny fibres hita ao amin'ny tavy mpampitohy dia azo sokajiana ho karazany telo toy ny kôlesterônina kôlesterôla, elastin ary reticular proteinina. Ny kofehy collagen no kofehy matanjaka indrindra sy matevina. Ny kofehin'ny Elastin dia kofehy manify izay afaka mihinjitra sy miverina. Ny kofehy reticular kosa dia kofehy marefo be branched hita ao amin'ny taova manana firafitra toy ny harato.
2. Inona avy ireo fibre collagen
3. Inona avy ireo fibre Elastin
4. Inona avy ireo fibre reticular
5. Ny fitoviana eo amin'ny collagen Elastin sy ny fibre reticular
6. Fampitahana mifanila - Collagen vs Elastin vs Reticular Fibers amin'ny endrika Tabular
Inona avy ireo fibre collagen?
Ny kofehin'ny collagen no fibre proteinina be indrindra hita ao amin'ny matrix extracellular an'ny vatan'ny mpampitohy. Kofehy miloko fotsy izy ireo. Anisan'ireo karazana kofehy telo hita ao amin'ny tady mpampitohy, ny kofehin'ny collagen no matevina sy matanjaka indrindra. Kibary bitika nefa matanjaka be izy ireo. Ny kofehy collagen dia vita amin'ny fibril collagen izay sub-unit toy ny kofehy. Izy ireo dia vita amin'ny vondrona triplets misy molekiola collagen tsirairay izay milamina mifanila. Ny felatanan'ny collagen dia manana endrika 64 m banded.
Sary 01: fibre collagen
Ny collagen dia proteinina manana subtypes 30 eo ho eo. Anisan'izany, karazana 4 no tena misolo tena azy. Izy ireo dia collagen type I, type II, type III ary type VI. Ny karazana collagen I no karazana collagen malaza indrindra ary mitentina 90% ny collagen'ny vatana. Ny karazana I dia hita ao amin'ny dermis amin'ny hoditra, taolana, tendon, fasciae, kapsily organ ary faritra maro hafa. Ny kofehin'ny collagen dia manao ny rafitra ivelan'ny sela amin'ny sela rehetra. Tena zava-dehibe amin'ny hery matanjaka izy ireo.
Inona avy ireo fibre Elastin?
Ny kofehin'ny Elastin dia karazan-tady proteinina hita ao amin'ny sela mampitohy. Fantatra ihany koa amin'ny fibre mavo izy ireo. Ny kofehin'ny elastin dia afaka mamelatra sy miverina. Afaka miverina amin'ny endriny tany am-boalohany izy rehefa nivelatra na natetika. Izy ireo dia vita amin'ny proteinina toy ny fingotra antsoina hoe elastin.
Sary 02: Fibre Elastin
Ankoatr'izay, manana proteinina hafa kely kokoa izy ireo (elaunin sy oxytalan) ary glycoproteins . Ny kofehin'ny elastin dia be dia be amin'ny tavy elastika hita amin'ny hoditra sy ny tadin'ny elastika eo amin'ny tsanganana vertebral.
Inona avy ireo fibre reticular?
Ny fibre reticular dia karazan-tady proteinina hita ao amin'ny sela mampitohy reticular. Ny kofehy reticular dia vita amin'ny fibril collagen tena tsara izay miseho ho toy ny bandy 64 nm.
Sary 03: Fibre reticular
Ny fibre reticular dia be sampana ary mamorona tambajotra marefo. Noho izany dia hita ao amin'ny taova izy ireo izay manana firafitra anatiny toy ny harato. Taova roa ny taola-malemy sy ny lymphoid. Spleen dia feno kofehy reticular satria miasa toy ny sivana izy io. Ankoatr'izay, ny kofehy reticular dia kofehy argyrophilic izay mandoto amin'ny vahaolana volafotsy ammoniacal.
Inona avy ireo fitoviana misy amin'ny Collagen Elastin sy ny fibre reticular?
Ny collagen, elastin ary reticular dia karazana fibre proteinina telo izay hita ao amin'ny vatan'ny mpampitohy.
Ny matrix Extracellular an'ny tavy mpampitohy dia ahitana ireo karazana kofehy telo ireo.
Ny kofehy telo dia tafiditra ao anaty votoatin'ny tany.
Ny vatan'ny mpampitohy loose dia manana karazana kofehy telo.
Ireo fibra ireo dia manome fanohanana ireo sela sy taova.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Collagen Elastin sy ny fibre reticular?
Ny kofehy collagen no kofehy proteinina mahery indrindra sy matevina hita be indrindra ao amin'ny vatan'ny mpampitohy. Ny kofehin'ny elastin dia kofehy manify kokoa izay afaka mihinjitra sy mihemotra raha ny kofehy reticular kosa dia kofehy marefo be branche hita ao amin'ny taova izay misy firafitra toy ny harato. Noho izany, io no fahasamihafana lehibe eo amin'ny collagen elastin sy ny reticular fibres.
Ankoatr'izay, amin'ny tavy mpampitohy, ny kofehy collagen no tena fahita amin'ny karazan-tsoavira mampifandray, raha ny kofehy elastin kosa dia misongadina amin'ny tavy elastika ary ny kofehy reticular dia misongadina amin'ny taova spleen sy lymphoid. Ny kofehy collagen sy ny kofehy reticular dia vita amin'ny fibril collagen raha ny fibre elastin kosa dia vita amin'ny kofehy elastin.
Etsy ambany ny tabilao infographic dia manome ny fahasamihafana misy eo amin'ny collagen elastin sy ny reticular fibres ho an'ny fampitahana mifanila.
Famintinana - Collagen Elastin vs Reticular Fibers
Ny kofehy collagen, elastin ary reticular no karazan-tavy proteinina telo hita ao amin'ny sela mampitohy. Ny kofehy collagen no karazan-tavy betsaka indrindra ao amin'ny matrix extracellular amin'ny vatan'ny mpampitohy. Izy ireo dia vita amin'ny kofehy collagen ary izy ireo no kofehy matanjaka sy matevina indrindra. Ny kofehin'ny elastin dia kofehy malaza amin'ny kofehy elastika hita amin'ny hoditra sy ny kofehy elastika eo amin'ny tsanganana vertebral. Ny proteinina elastin dia amboarina indrindra. Ny proteinina reticular dia kofehy fohy misy sampana indrindra hita ao amin'ny taova izay misy rafitra anatiny toy ny harato. Noho izany, ny fibra reticular dia be ao amin'ny taova spleen sy lymphoid. Noho izany, ity dia mamintina ny fahasamihafana misy eo amin'ny collagen elastin sy ny reticular fibres.
1. "Tissue Connective." Lumen, Hita eto .
2. "Inona ny atao hoe collagen? - Famaritana, karazana ary aretina. ” Study.com, Azo zahana eto .
1. "Sary 33 02 07" Nosoratan'i CNX OpenStax - (CC BY 4.0) tamin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
2. "Gray377" Nosoratan'i Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy an'ny vatan'olombelona. Bartleby.com: Anatomy Gray, Plate 377, Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
3. "Reticulin amin'ny atiny" Nosoratan'i Nefron - Asa manokana (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny niandohana sy ny fampidirana Fahasamihafana eo amin'ny Epithelium tsotra sy tsotra Fahasamihafana eo amin'ny Osteoblast sy Osteocytes Fahasamihafana eo amin'ny Perichondrium sy Periosteum Fahasamihafana eo amin'ny Ultrafiltration sy ny reabsorption voafantina
Rafitra planeta vaovao TRAPPIST-1 hita tamin'ny 2017
Fahasamihafana eo amin'ny HTC Sense 4G sy Samsung Galaxy S 4G
Fahasamihafana eo amin'ny LiAlH4 sy NaBH4
Fahasamihafana eo amin'ny Geology sy Geophysicist
Fahasamihafana eo amin'ny huile essentielle sy menaka manitra